Ny Tari-dalana avy amin'ny Semalt: Ahoana no ahafahanao mandeha ny Digital Business
Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, ny fandrosoana ara teknolojia amin'ny vanim-potoana nomerika vaovao dia manolotrapototra tsy voafetra. Maro amin'ireo orinasa no mandeha an-tserasera noho ny mety ho vitan'ny Search Engine Optimization (SEO). Vokatr'izany diaTena ilaina amin'ny fandraharahana ny fandraiketana ny aterineto ho toy ny sehatra ara-barotra vaovao, izay ahafahan'ireo orinasa mamboly tsara.
Mba hahatonga ny orinasa nomerika hahomby amin'ny aterineto, hevero ireo lafiny ireo, araka ny marinanofaritan'i Oliver King, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Ny fiasan'ny masinina dia manolo ny ezaky ny olombelona haingana - habilitar protocolo ssl. Amin'ny toe-javatra hafa, misy ny fiakaranamampiasa fitaovana entin-tsaina. Ao amin'ny Internet of Things (IoT), ireo mpandalina dia maminavina fa amin'ny taona 2020, maherin'ny 20.8 lavitrisa "milina mahay"dia hampiasa fifandraisana aterineto. Araka ny teknolojia farany, ny fitaovana enti-manavaka dia manana fahaizana toy ny:
Ny automation toy ny fiara mitondra fiara
Mahatsiaro (toy ny fantsonan'ny IoT toy ny NFC)
dika 3D amin'ny famoahana rindra 3D maro
Mizara API izay mamela ny tontolo iainana an-tserasera
Fifanakalozan-kevitry ny mpampiasa toy ny fankatoavana ny fitenenana, ny fingerprints aryfanadiovana fandinihana manokana
Ny fitaovam-pitsikilovana (AI) dia mandray ny fiasan'ny milina mahay.Amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo teknolojia isan-karazany, ny ordinateran'ny kognita dia afaka misaina, mifampiraharaha, mianatra sy mahatakatra ny tontolon'ny olombelona..Amin'izao fotoana izao, manamboatra ny asan'ny olona ny milina manam-pahaizana manam-pahaizana amin'ny artificial intelligence. Manampy amin'ny lafiny toy nyny faminaniana ary ny fahitana ireo fiovana sarobidy. Any amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra, ny solosaina dia afaka mandinika ny fironana sy manome vahaolanamiaraka amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana.
3. Fiovàna manelingelina
Ny teknôlôjia dia tena mavitrika indrindra raha ny momba ny IT. Izany fandrosoana izany dia midikafa tokony ho vonona ny hanaiky ny fomba vaovao ho an'ny tsara indrindra amin'ny orinasa ianao. Ireo teknika vaovao dia mety ahitana fanakorontanana lehibe toy izanytoy ny fampindramana mpiasa bebe kokoa ary ny fitadiavana ny fampiasana mpiasa sasany tsy marim-pototra. Ny fandravana dia mety hahakasika ny fananganana ny staff ho an'ny fanofanana amin'ny aterinetoteknika toy ny fananganana fahaizana. Ity karazana fanakorontanana ity dia tsy azo raisina amin'ny fomba malefaka ataon'ny ankamaroan'ny mpiasa. Rehefa manohitra ny sasany dia adidinao izanyMandresy lahatra azy ireo ny maha-zava-dehibe ny fomba fiasa sy ny tombontsoa maharitra eo amin'ny orinasa.
Anisan'izany ny foto-kevitra etsy ambony sy ny vanim-potoana sy ny fanadihadiana. VaovaoNy orinasa dia manomboka noho ny fahafaha-manao maro ateraky ny aterineto sy ny ordinatera. Ohatra, eo amin'ny tontolon'ny fitaovana,Ireo tranonkala dia mamaritra ny traikefany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny votoatin'ny mpamaky azy. Ny fitaovam-pitadiavana toa an'i Google dia manana ny fahaiza-manaonyManambara ny fikarohana karohinao. Ho an'ny tranga hafa dia nalain'ny dokam-barotra nokendreny ny aterineto hitondra sary tsara kokoany fanadihadiana momba ny tsena.
Ny orinasa dia afaka mivoaka an-tserasera mba haka ireo mpanjifany vaovao. Amin'ny alalan'ny SEO, mpampiasamamorona marika matanjaka matanjaka ary mametraka toerana madio ao amin'ny SERP ho an'ny votoatin'ny sora-baventy. Izany toe-javatra izany dia ny foof marketing online. Ny raharaham-barotra tsirairay dia manandrana manatanteraka izany. Ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo dia afaka manosika ny orinasa hiditra amin'ny fampidiranasehatra dizitaly amin'ny lafiny sasany manan-danja manana oram-barotra.